Firefox 78 ndiyo yazvino vhezheni yeiyi browser yeOS X 10.11 El Capitan uye yapfuura | Ndinobva mac
Firefox 78 ndiyo yazvino vhezheni yeiyi browser yeOS X 10.11 El Capitan uye pakutanga
Kwechinguva chidimbu kwevhiki, isu tatoziva izvo iyo makomputa anoenderana ne macOS Big Sur, iyo yakamirirwa kwenguva refu yekushongedza kugadziridza iyo vazhinji vashandisi vanga vakamirira paMac, uye izvo kunwa zvakananga kubva dhizaini yatinogona kuwana muPadOS. Big Sur inosiya kunze kwekuvandudzwa kune zvese zvishandiso pamberi pa2013 kunze kweMac Pro.
Vashandisi veMac vanofanirwa tanga kunetseka kana komputa yako yapera kugamuchira gwaro idzva rehurongwa hwako hwekushandisa, nekuti zvese zvinogadziridzwa zvine chekuita nekuchengetedza, kunze kwekunge zvichikosha kwazvo, hazvizosvika kumakomputa ako chero nguva. Asi kana tikashandisa zvishandiso zvedu zvine mutsigo, tinogona kuramba tichishanda nazvo.
Nekudaro, kana iri bhurawuza iyo inomira kugamuchira inogadziridza, zvinhu zvinooma uye zvakawanda, sezvo chiri chishandiso icho isu chatinacho chekuwana internet, ine njodzi dzese dzinosanganisira izvi.
Bhurawuza rekupedzisira rakazivisa kuti richarega kupa rutsigiro kune mamwe maMac makomputa ndiFirefox, kunyanya kune vese vanogadziriswa OS X El Capitan kana pakutanga, senge OS X 10.9 Mavericks uye OS X 10.10 Yosemite.
Sekureva kweMozilla, masisitimu anoshanda asingagamuchire ekuvandudzwa ane hutachiona hunozivikanwa hunogona kushandiswa chero nguva, zvichiita kuti zviome kuchengetedza Firefox.
Nenzira iyi, Firefox 78 ichave yazvino vhezheni yeiyi browser kubva kuMozilla Foundation iyo vese vashandisi vane yavo yekushandisa system ndeye Mavericks, Yosemite kana El Capitan vanogashira. Mune ino kesi, hazvina basa kutsvaga imwe bhurawuza, nekuti dzese dzinoenderana nemibvunzo yekumira kupa rutsigiro.
Firefox ibhurawuza, haisi iyo inoshanda sisitimu uye seye browser (application) inobatwa nehutachiona hwehurongwa. Kana iye mugadziri weiyo inoshanda sisitimu asingakuchengete iwe uchigadzirisa matambudziko ezvekuchengetedza, hapana chavanogona kuita zvachose.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » Firefox 78 ndiyo yazvino vhezheni yeiyi browser yeOS X 10.11 El Capitan uye pakutanga
Bhurawuza rakanakisa kwandiri. Ndinovimba vachazogadzirisa mashandisirwo ezvekubata-bata kunze kwekuisa yechitatu-bato rekuwedzera.
YeWatch yekuwachisa mawoko kuona kwaive makore mukugadzira
Kudzivirira mugadziri waJacob kusaina zvakare Apple